Nhau - CPhI
CPhI chiitiko chakasimbiswa chemishonga chine makore anopfuura makumi matatu 'chiitiko chekuunza pamwechete vanofambisa uye vanozunza mu pharma. Izita rakamisikidzwa muindasitiri, CPhI Pasi Pose chinhu chakakosha chekarenda ye pharma ichibatanidza zviuru zvevanyanzvi uye vanotengesa kubva pasirese pasi pemba imwechete. CPhI Pasi Pose uye zviitiko zvaro zvakabatanidzwa ICSE, P-MEC, FDF, InnoPack & BioProduction chimwe nechimwe chakakamurwa kuva zvikamu-zvakanangana nezvechigadzirwa kuitira kuti ipe indasitiri yega yega kuona uye kubvumira vashanyi kuwana nyore nyore uye nekuwana izvo zvigadzirwa zvavari kutsvaga nokuti. Foring yatora chikamu muCPhI anopfuura makore mashanu munyika zhinji senge Germany, Spain, neIndia.
Dhayi yepakati peturuleum yekumucheto zvigadzirwa, izvo zvinowedzeredzwa kugadziridzwa kune chero kunyorera. Pakushanda ivo vanoshandurwa kuve madhayi akapera uye pigments. 2,4-Dinitrochlorobenzene (DNCB) inhengo yehupenyu. Iyo yeyellow solid iyo inosungunuka mune organic manyungudiki. Iyo yakakosha yepakati kugadzirwa kwemaindasitiri kwesurufa dhayi. Foring yakanangana neichi chepakati kwemakore mazhinji.
Tichifunga nezve inoenderera mberi COVID-19 mamiriro, mazhinji edu maexhibition akabviswa kana kumisikidzwa. Mhedziso iyi yanga isiri iyo yakasvitswa zviri nyore, asi tiine hutano nekuchengeteka kwenharaunda yedu mupfungwa, takaita sarudzo yekuita izvozvi, tichibvumira vatinoshanda navo bhizinesi nguva yakakwana yekugadzirisa zvirongwa zvavo. Tinoda kutora mukana uno kuwana vatengi vatsva online. Ndiwo zvakare mukana wakanaka kuti iwe uve nemumwe mutengesi.
CPhI Delhi India India 2019
CPhI Madrid Spain EXPO 2018
Post nguva: Jul-31-2020